FA Cup: Taageereyaal Garoonka Soo Galay oo gacanta ula tegay ciyaartooyada iyo murugga Aston Villa vs West Brom
HomeEnglandFA Cup: Taageereyaal Garoonka Soo Galay oo gacanta ula tegay ciyaartooyada iyo murugga Aston Villa vs West Brom
08/03/2015 Abdiwahab Ahmed
Xidhiidhka kubadda cagta Ingiriiska ee FA ayaa baadhitaan ku samaynaya, isla markaana laga sugayaa ganaax culus oo uu ku ciqaabayo taageereyaasha kooxda Aston Villa kuwaas oo ciyaar xalay dhex martay Wes Bromwich Albiol ina ay garoonka soo galeen gacanta ula tegay ciyaartooyadii martida ahaa ee Wes Bromwich.
Kumanaan taageereyaal ah ayaa garoonka soo galay iyagoo samaynaya rabshad kuwaas oo u badnaa budhcad iyo rabshad wadeyaal kuwaas oo dadka xasuusiyey sannadihii toddobaataneeyadii iyo siddeetamaadkii, markaas oo sidan oo kale loo weeraray ciyaartooyada Wes Bromwich.
Ciyaartan oo ku dhamaatay 2-0 ay ku badisay Aston Villa, ayaa haddana uu garoonkii isku beddelay suuq dagaal oo feedh la isku adeegsanayo, iyadoo booliskii garoonka joogayna waxba ka qaban kari waayeen.
Xidhiidhka FA ayaa laga sugayaa in uu qaado tallaabo uu taageereyaasha kaga mabnuuci doono in ay u soo daawasho tagaan garoonka Aston Villa ciyaaro dhawr, taas oo ah in garoonkaas lagu qiyaari doono iyadoo aanay taageereyaal joogin.
Ganaax lacageed ayaa ka mid noqon kara sida ay warbaahinta Ingiriisku qorayso, taas oo ugu yaraan noqon doonta £100,000.
Tababareyaasha labada kooxood ayaa si adag u cambaareeyey tallaabadan ay qaadeen taageereyaashu.
Tababaraha Aston Villa, Tim Sherwood oo arrintan ka hadlay ayaa yidhi: “Ma ogi in wax lagu dhuftay ciyaartooyada Wes Brom, waanse fahamsanahay dareenka taageereyaasha ee ah in ay garaacaan kooxda uu ka dhexeeyo xafiiltanka gudahu oo aanu markii labad garaacnay toddobaad guhihii, mase taabacsani in taageereyaashu ay garoonka soo galaan. Ma taageersanin, waliba in cid la taabtona ka sii daran” sidaas ayuu yidhi Sherwood.
Sherwood waxa kale oo uu sheegay in taageereyaasha Wes Bromwich ay iyaguna u dhaqmeen si masuuliyad darro ah oo ay kuraas jejebiyeen.
Wariyihii idaacadda BBC u joogay garoonka ee warka u soo tebinayay ayaa si layaab leh uga hadlay ciyaara, waxaanu yidhi: “Muuqaalku wuxuu la mid yahay kii 1980aadkii gebi ahaantiiba. Dabcan waa wax doqoniimo ah”.
War-saxaafadeed qoraal ah oo ay soo saartay Aston Villa ayaa waxa lagu sheegay in aad ay kooxdaasi uga xun tahay hab-dhaqanka taageereyaashoodu sameeyeen iyo waliba in ay tahay wax laga xumaado oo aan sinaba loo aqbali karin.
Waxa kale oo raalligelin loogu diray war-saxaafadeedkaas xidhiidhka FA, kooxda West Bromwich Albiol iyo cidda kale ee dhibaatadu ka soo gaadhay kooxdaas.
Tony Pulis oo ah tababaraha West Bromwich oo isna warbaahinta la hadlay ayaa fool xumo ku tilmaamay wixii dhacay. Waxa uu sheegay in iyagoo kubaddii lagaga badiyey, haddana ay qaar saqajaamiin ahi garoonka soo buuxiyeen oo ay soo weerareen ciyaartooyadiisa.
Waallidii Daqiiqadihii Dheeraadka, 2 Rikoodhe Oo La Siiyey Kane, Gantaalkii Wanyama iyo Bandhigga Kulankii Liverpool Iyo Tottenham
04/02/2018 Abdiwahab Ahmed
11 ilbidhiqsi, 8 taabasho, iyo 1 Gool oo yaab leh: Mala Odhan Karaa Waa Dhamaadkii Tiki Taka
28/01/2018 Diiriye Ahmed